Ye-Mon's Personal Pages: Burmese Genealogical Terms
what an amazing contribution! for the english, anyone outside your immediate family isacousin. that's all; you don't haveaclue where exactly on the family tree that person is! i am thankful to our system for its complex but accurate ranking method. well worth maintaining! all burmese youngsters as well as some old-but-not-so-informed folks should learn it well.
ဟုတ်မယ်ဗျ။ ရန်ကုန်သူ၊ ရန်ကုန်သားတွေ အဲဒီလို သိပ်မခေါ်ကြဘူး။ ဗမာစကားလည်း တခါတရံ စကားလုံးကြွယ်တာလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိလာရင် လူငယ်တွေ ဗမာစာကို ပိုပြီး အသုံးချကြမလားလို့ မျှော်လင့်မိတာပါ။
thanks for your comment. i am not the original contributor of this post. i just recalled what i read long time ago plus what i learned from my family. anyway, i am really glad that you found it useful and hope you would share this with others.
ရန်ကုန်က ရှေးရိုးကျတဲ့သူတွေ ဒီလိုခေါ်ကြပါတယ်။ ဒွေးကြီးဒွေးလေးမခေါ်ဘဲ ကြီးတော် ဒေါ်ကြီး စသဖြင့် ခေါ်ကြပါတယ် ။ အဖေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုလို့မွေးလာသူမောင်နမကို အဖေတူ အမေကွဲ၊ အမေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုလို့ မွေးလာသူမောင်နမကို အမေတူ အဖေကွဲလို့ ခေါ်ကြပါသေးတယ်
တခုထူးဆန်းနေသလိုဘဲ ဂျေတို့ ခေတ်က ကိုရဲမွန်ရေးတဲ့ ဆွေမျိုးအခေါ်အဝေါ်ကို မြန်မာပြည် တပြည်လုံးက သာမဟုတ်ဘဲ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သား တွေကလည်း ခေါ်ဝေါ် သုံးဆွဲ ကြပါတယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ဒွေးကြီး၊ ဒွေးလေး အစား ကြီးတော်၊ ဒေါ်လေး။ ဦးကြီးအစား ဘကြီး သုံးပါတယ်။ ခုခေတ် ရန်ကုန်က ကလေးတွေက ဒါတွေမသိဘူးလား၊ ရန်ကုန်မှာ ဒီလိုမခေါ်ဘူးလို့ ဆိုတာ လွန်စွာမှ အံ့သြသွားမိပါတယ်။ မိဘတွေက အင်္ဂလိပ်လို ဘဲ ခေါ်ခိုင်း နေကြလို့ လား။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ရှေးရိုးစဉ်လာကို သင်ပေးတဲ့ (မြန်မာစာ)ဆရာမ မရှိတာလား၊ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ အခုလို မသိကြတာ မြန်မာပြည်နောင်ရေး ရင်လေး မိပါတယ်
ရန်ကုန်မြို့ သားစစ်စစ် (အညာလုံးဝမရောက်ဘူးပါ)
ကျွန်တော်တို့ ရွှေဘိုမှာတော့ တော်တော်များများ သုံးတယ်ဗျ ...
ကျွန်တော့် ညီမရဲ့ သမီး (ကျွန်တော့် တူမ) က ကျွန်တော့် ကို ဦးကြီးလို့ ခေါ်တာ ရန်ကုန်က လူတွေက မသိကြဘူးဗျ ... အထူး အဆန်းဖြစ်နေတယ်
ဟုတ်ပါတယ်ဆြာစိုးထက် ရန်ကုန်က ဘကြီးလို့ ခေါ်ပါတယ် ဦးကြီးဆိုတာ ဖတ်စာအုပ်မှာ ကာတွန်းတွေ မှာပါတော့ တောရွာက အခေါ်အဝေါ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ဘကြီး။ ကြီးတော် သုံးပါတယ်၊ ဆြာတို့ အသက်ပိုင်းခြား လောက်မှာ ရန်ကုန်ကလူတွေ က အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ကြတာလား ကျောင်းက မြန်မာစာဆရာတွေ က မသင်ကြားမပို့ ချလို့ လားမပြောတတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ခေတ်ကတော့ အခေါ်အဝေါ်အကုန်သိကြပါတယ်။ နှောင်းခေတ်လူသားလို့ တောင် သတ်မှတ်ရမလို ဖြစ်နေပါပြီ